Olee otú m nwere ike ịgbanwe, kpatụ ma ọ bụ idozi video etiti ọnụego.
> Resource> Video> Olee Otú M Pụrụ Ịgbanwe The Video si ụba Rate?
Tupu ị malite ịgbanwe, ịgbanwe, idozi ma ọ bụ tọghata etiti ọnụego, mkpa ka ị maara nke otu isi nke bụ n'ezie video etiti ọnụego egosipụta bụ n'ụzọ dị ukwuu dabere na kọmputa gị ngwaike ikike. Ọ bụ ezie na ọ bụ nkịtị ntọt a video àgwà site na-abawanye na etiti ọnụego, a ga na-arụ ọrụ ruo isi ihe ụfọdụ. Plus, e nwere ihe na-abịa na ya nakwa nke bụ ibu faịlụ size. Ọ bụrụ na ị dị njikere iji tọghata video etiti ọnụego, na-agbalị ka ịhazie etiti ọnụego na Wondershare Video Ntụgharị Ultimate.
1 Iji kpatụ video etiti ọnụego
Mgbe adọkpụpụta gị video faịlụ ma ọ bụ na-ahọpụta nke video na ị chọrọ ịgbanwe eku ọnụego, mfe click on Ntọala n'ihi na ihe nhọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị a video faịlụ na ị ga-achọ ịgbanwe eku ọnụego, ị ga-enwe obi ụtọ ịmata na i nwere ike ime ha niile ozugbo, ihu ọma na batches.
E nwere ihe Nsonye nke Dezie button abịa kemfe n'ihi na ị dị ka mma ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla edezi na ị ga-achọ ime tupu na-agbanwe agbanwe, n'ịgbanwe, gwara ma ọ bụ converting video etiti ọnụego.
2 ịgbanwe video etiti ọnụego
Ọ bụrụ na ị pịa na Video-ụba Rate 's adaala menu, ị ga-achọpụta na e nwere bụ nnọọ a nhọrọ nke etiti udu na ị nwere ike ịhọrọ site na kasị ala etiti kwa abụọ (fps) nke 12 a kacha nke 30fps.
Ọ bụrụ na ị nwere gara aga ahụmahụ nke ma na-amụba ma ọ bụ decreasing video etiti ọnụego, eleghị anya ị ga-achọpụta na e nwere ihe a ga-ekwe omume nke risking àgwà nke mbụ video faịlụ mgbe a akakabarede. Otú ọ dị, e nwere bụ nnọọ ZERO àgwà ọnwụ ma ọ bụrụ na ị họrọ ịgbanwe, idozi ma ọ bụ tọghata etiti ọnụego na Wondershare Video Converter Ultimate. Ya mere, ị ga-itukwasi na a ga-abụ ihe ọ bụla playback okwu ma ọ bụ ihe ndị mere adịru ọdịyo adabaghị na video idaha mgbe ị converted eku ọnụego.
Ozugbo ị kpebiri na adabara etiti ọnụego, dị nnọọ pịa OK na mgbe ahụ tọghata bọtịnụ.
3 tọghata video faịlụ (mgbe na-agbanwe agbanwe etiti ọnụego)
Ezie na Ntụgharị na-agbanwe agbanwe eku ọnụego nke gị video faịlụ, ị ga-enwe ele ọganihu nke ntughari ka egosipụta n'ime screenshot n'okpuru. Ị nwekwara ike ịhọrọ ịkagbu ya ọ bụla mgbe n'oge akakabarede ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị. Akakabarede usoro n'ụzọ nkịtị okokụre ọbụna tupu ị na-aghọta ya.
Malite na-amụta ihe banyere ihe dị iche na nke etiti udu!